Ndị na-emepụta ihe na ngwaahịa na ndị na-ebu ya | China Dugara akpa Factory
20ft Ikanam akpa-ENWEGH CH CHASSIS
CT 20-foot led container-without chassis （Model ： E-CON20） bụ ụlọ ahịa ngosi mkpanaka ọhụụ na-adaba adaba (windo) maka ụlọ ọrụ iji gosipụta ngwaahịa na ịkwalite akara.
40ft Ikanam akpa-FOTON AUMAN
Ejiri 40ft LED Container-FOTON AUMAN （Model ： E-C40） nke Jingchuan ahaziri ma mepụta ya na chassis ụgbọala na-adọkpụ. A na-akwadebe ụgbọ ala a nwere nnukwu ihuenyo ọkụ na-acha agba n'èzí na mpaghara ihuenyo nke 40 square mita. Okwesiri maka nnukwu ihe omume na ụlọ ọrụ TV dị ka mgbasa ozi na mgbasa ozi ndụ, nwere ike ịghọta mgbasa ozi dịpụrụ adịpụ na ịghagharị.
15ft mere akpa-na-enweghị chassis
Na ahia esenidụt, igbe ebu bụ na a na ogbo nke ngwa ngwa mmepe na uto. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ ahịa ụgbọ ala ebu ụzọ emere na China bụ ihe dịka 30% -50% nke ngwaahịa ndị si mba ofesi. Nke a na-enye anyị ohere ịnwe ọnụahịa buru ibu karị.
40ft ikanam akpa-CIMC
JCT 40ft LED Container-CIMC （Model ： E-CON40） bụ ụgbọ ala pụrụ iche nke dị mfe maka arụmọrụ mkpanaka ma nwee ike tinye ya na ogbo. Ejiri 40ft LED Container nwere nnukwu ihuenyo ihuenyo n'èzí, ọkwa hydraulic zuru ezu, na ọdịyo ọkachamara na ọkụ.
Mobile Ikanam Screen Truck, Dugara Mobile Trailer, Mobile Dugara Billboard Truck, Ikanam Mobile Truck N'ihi Sale, Ekwentị Mgbasa Ozi Ekwentị, Ikwute Mobile Truck,